Iphupha malunga nesitofu seTayile ➡ ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Iphupha malunga neSitofu seTayile
Nokuba isitovu setayile sinokubonakala ngathi siyinto ka-ugogo kwabaninzi, siyakonwabela ukukhula kwakhona namhlanje. Kuba ngenxa yokunyuka kweendleko zokufudumeza, abantu abaninzi babuyela kwilog yokufudumeza kwakhona ukuba kunokwenzeka.
Nangona kunjalo, ukubonakala kwezitovu zethayile kutshintshile okwangoku kwaye, ukongeza kwiimodeli zeklasikhi, kukho inani lokwahluka okwangoku. Kuba uninzi lwezitovu zethayile zinkulu kakhulu, zinokusetyenziselwa ukufudumeza amagumbi okuhlala amaninzi ngaxeshanye.
Kodwa kutheni isitovu esinethayile sibonakala kuthi emaphupheni? Ngaba oku mhlawumbi kuyafihla umnqweno othile wokhetho olunje okanye mhlawumbi into eyahluke mpela?
1 Uphawu lwephupha «isitovu esinethayile» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «isitovu esinethayile» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «isitovu esinethayile» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «isitovu esinethayile» - ukutolikwa ngokubanzi
Kwinqanaba eliqhelekileyo lohlalutyo lwamaphupha, uphawu lwephupha "isitovu esinethayile" sinokusetyenziswa njengendawo yokubonisa imeko ethambileyo neyamkelekileyo. ubomi obutofotofo ukuba iqondwe. Ukulangazelela umntu olele kwimeko enjalo kungaboniswa nakweli phupha.
Ukuba uhleli ngasesitovu esifudumeleyo ephupheni lakho, uya kuhlala ungowakho ndwele okanye ubuvila obubonisiweyo. Kungenxa yokuba lo mntu kuthethwa ngaye ubonakalisa umdla omncinci emsebenzini okanye nakweminye imisebenzi yobomi evukayo. Ukuhlala kunye nosapho phambi kwesitovu esinethayile kunokuzisa ikamva elingakhathaliyo.
Isitovu setayile eshushu sinokuhlala sikhangeleka njengephupha Umdla kwaye uphawule iminqweno. Ukuba ubushushu kwisitovu esinethayile buyehla ngexesha lokulala, umntu ophuphayo kufuneka aqhele iimvakalelo zakhe komnye umntu. Kungenxa yokuba ezi ziqala ukuphola okanye ukwehla. Ukuba isitovu setayile siyabanda ngelixa ulele, oku kunokuqondwa njengophawu lomzamo wokuchitha.
Isitovu sethayile esaphukileyo sibonisa kwiimeko ezininzi ngokokuchazwa ngokubanzi kwamaphupha. iingxaki zobudlelwane. Umntu kufuneka aqwalasele oku ngaphakathi el mundo ukuvuka.
Uphawu lwephupha «isitovu esinethayile» - ukutolikwa kwengqondo
Ukusuka kwindawo yokujonga kwengqondo, isitovu esinethayile sibonisa imvakalelo yokhuseleko kunye nokhuseleko njengephupha. Thela okuthanda kakhulu. Oku kufumaneka ikakhulu kubomi bosapho, ukuze umntu ophuphayo akwazi ukuba nolwaneliseko lwakhe kwicandelo labucala.
Kodwa ngasemva kwesimboli yephupha «isitovu esinethayile» kusenokubakho isicelo fihla. Ukuphupha akufuneki kubandakanye ubuvila okanye kuphuhle ukoneliseka okukhulu, kodwa kusebenze ngokuzimisela ekuvuseni ubomi.
Ukuba uphemba umlilo kwisitovu esineethayile ephupheni lakho, uhlala uwulangazelela. ubomi ngaphandle koloyiko. Ingakumbi kwindawo yeemvakalelo ufuna ukuzikhulula kuloyiko lwakho ukuze ube nolwalamano olungcono.
Kwakhona, kunokuba ngumdla kutoliko lwengqondo ngephupha elilelegumbi lendlu okanye kwigumbi lesitovu ebelifakwe ephupheni. Umzekelo, ukuba eli ibiligumbi lokuhlala, inokuba lingaphakathi. Ubume bengqondo Qaphela, ibonakaliswa ngokwoneliseka kunye nokulinganisela.
Uphawu lwephupha «isitovu esinethayile» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa kwephupha lokomoya kutolika isitovu esinethayile ephupheni elifana nophawu "lwesitovu" sephupha. Ke ngoko, ngasemva kweli phupha kunokubakho isikhombisi se ukuguqulwa fihla ubuntu bokomoya bomphuphi.